ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဝေဒနာ | Christ's Agony in Gethsemane | Real Conversion
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၁၇ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
“ထိုဂေသရှေမန်အရပ်သို့ရောက်ကြလျှင် ကိုယ်တော်က၊ ငါဆုတောင်း စဉ်တွင် သင်တို့သည် ဤအရပ်၌ ထိုင်နေကြလော့ဟု တပည့်တော်တို့ အား မိန့်တော်မူပြီးမှ၊ ပေတရု၊ ယာကုပ်၊ ယောဟန်တို့ကို ခေါ်သွား၍ မိန်းမောတွေဝေခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ ရောက်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ငါ သည် သေလောက်အောင်စိတ်နှလုံးအလွန် ညှိုးငယ်ခြင်းရှိ၏။ ဤအ ရပ်၌စောင့်နေကြလော့ဟု တပည့်တော်သုံးယောက်အား မိန့်တော်မူပြီး ၍၊” ( မာကု ၁၄း ၃၂- ၃၄ )
ခရစ်တော်သည် တပည့်တော်များနှင့်အတူ ပဿခါကို စားသောက်ခဲ့သည်။ ညစာ စားပြီးနောက်တွင် ခရစ်တော်သည် သူတို့ကို မုန့်နှင့်ခွက်ကိုပေးခဲ့သည်။ ၎င်းကို “ပွဲတော်မင်္ဂ လာ” ဟု ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သည်။ မုန့်က နောက်နေ့ နံနက်အချိန်တွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်၌ အသေ ခံမည့် သူ၏ကိုယ်ခန္ဒာကို ပုံဆောင်သည်။ ခွက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုဆေးကြောသန့်စင် ပေးမည့် သူ၏အသွေးတော်အကြောင်းကို ပြောဆိုသည်။ ထို့နောက် ယေရှုသည် တပည့် တော်များနှင့်အတူ တေးသီချင်းကိုသီဆိုပြီး ညကိုဖြတ်သန်းရန် အခန်းထဲမှ ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြ ပါသည်။
သူတို့သည် ယေရုရှလင်အရှေ့ပြင်ဘက်သို့ သွားခဲ့ကြပြီး စမ်းချောင်းလေးကို ဖြတ် ကျော်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အဆုံးပိုင်း အနည်းငယ်ဝေးအောင်သွားခဲ့ကြ ပါသည်။ ယေရှုသည် ဂေသရှေမန်အစွန်တွင် တပည့်တော်ရှစ်ပါးကို ထားရစ်ခဲ့ပြီး ဆုတောင်း ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သူသည် ပေတရု၊ ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုထားခဲ့သည့် ဥယျာဉ်ထဲသို့ သာ၍နက်အောင်သွားခဲ့သည်။ ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်း အမှောင်ထု၊ သံလွင် ပင်အောက်နားအထိသို့သွားခဲ့ပါသည်။ သူသည် ထိုအရပ်၌ နာကျင်စွာခံစားပြီး ပူဆွေးသော ကရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သူတို့အားဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည် သေလုမတတ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်ဟု ဆိုသည်။ သူသည် အနည်းငယ် ရှေ့သို့သွားပြီး မြေကြီးပေါ်တွင် ဒူးထောက်၍ ဖြစ်နိုင်ရင် ဤခွက်သည် လွန်ပါစေသော် ဟု ဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့သည်။ ( မာကု ၁၄း ၃၃၊ ၃၅ )
J. C. Ryle က “ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အတွင်း သခင်ဘုရား၏ဒုက္ခဝေဒနာသမိုင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ နက်နဲပြီး ဆန်းကြယ်သောကျမ်းပိုဒ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရှင်များ (ဓမ္မပညာ ရှင်များ) သည်ပင် ပြည့်ပြည့်၀ဝနားလည်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်အရာများပါဝင်ပါသည်။ သို့သော် အရေးကြီးသောသမ္မာတရားအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြသပါသည်” ဟုဆိုသည်။ (J. C. Ryle, မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းချက်အမှတ်အသား၊ The Banner of Truth Trust, ၁၉၉၄၊ စာ- ၃၁၆၊ မာကု ၁၄း ၃၂- ၄၂ မှတ်စုများ )
ယနေ့ညတွင် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်ရှိ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထားဆီသို့ သွားကြပါစို့။ မာကုက သူသည် “အလွန်ပင် ဒုက္ခပွါးများခဲ့ရကြောင်း” ဆိုပါသည်။ ( မာကု ၁၄း ၃၃ ) ဂရိစကားလုံး “ekthambeisthai” ဖြစ်ပြီး အဓိပါယ်မှာ “ကြီးမားသောဒုက္ခ၊ နာကျင်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း” ဟု ဆိုလိုသည်။ “သူသည် အနည်းငယ်ရှေ့သို့သွား၍ မြေကြီးပေါ်တွင်ဒူးထောက်သည်။” သူတို့ကို လည်း “ကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည် သေလုမတတ် ဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါသည်ဟု ဆိုသည်။” ( မာ ကု ၁၄း ၃၄၊ ၃၅ )
J. C. Ryle က “ဤဖေါ်ပြချက်များအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအရာတစ်ခု သာရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ကိုယ်ကာယဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းသက်သက်မ ဟုတ်၊ လူ့အပြစ်၏ကြီးမားသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးသာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ထူးခြားသောနည်း လမ်းဖြင့် သူ့အပေါ်ဖိနှိပ်မှုရောက်လာသောအချိန်တွင် စတင်ပါသည်။ ၎င်းမှာ သူ့အပေးတင် ထားသော ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်နှင့်ကျူးလွန်သောဒုစရိုက်တို့၏ ပြော၍မရနိုင်သောဝန်ပင်ဖြစ်ပါ သည်။ သူသည် “ကျွန်ုပ်တို့အဖို့” ကျိန်ခြင်းကို ခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်ကြေကွဲ ခြင်းကို ဆောင်ယူသွားသည်။ သူသည် “အပြစ်မရှိသောသူဖြစ်လျက် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့အပြစ်ရှိ သောသူဖြစ်လာသည်။” သူ၏သန့်ရှင်းသောသဘာဝသည် သူ့အပေါ်တင်ထားသော လေး လာသည့် ဝန်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းတို့မှာ သူ၏သာမန်ထက်ပိုသောဝမ်းနည်းခြင်း၏ အကြောင်း တရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ဘုရား၏ဒုက္ခဝေဒနာကို ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်အ တွင်း၌ လုံး၀တွေ့ရပါသည်။ ( ဧဝံဂေလိအဖွဲ့အစည်းများ၏ယနေ့အတွေးအခေါ်မှာ ) အပြစ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့တွေးတောသင့်သည့်အရာထက် နိမ့်ကျနေပါသည်” ဟုဆိုသည်။ (Ryle, စာ- ၃၁၇ )
သင်တို့သည် ဘုရားကျောင်းပျက်ကွက်သည့် အပြစ်မျိုး၊ သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရှုခြင်းကို လစ်လျူရှုပြီး ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုသာကြည့်ခြင်း၊ အရက်သေစာသောက်ကြူးလျက် ကခုန်ခြင်းအ ပြစ်များကို ပေါ့ပေါ့သန်သန် မထင်မိပါစေနှင့်။ ဤကဲ့သို့သော သင်၏ပြစ်မှားကျူးလွန်ထား သောအရာများသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ယေရှုခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုထက်ကြီးမားသောအ ပြစ်အတွက်လည်း ခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ယေရှုအပေါ်တင်သော အကြီး မားဆုံးအပြစ်မှာ ဗီဇအပြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံးဝဆိုးသွင်းပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ် တို့၏လုံးဝပျက်စီးသောအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းမှ ဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည် “တပ်မက်သော စိတ်အားဖြင့် ကမ္ဘာကြီးထဲတွင်တည်ရှိနေသော ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။” ( ၂ ပေ ၁း ၄ ) “ကျွန်ုပ် တို့သည် မသန့်ရှင်းသောသူဖြစ်ရခြင်းမှာ” ဤအချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ( ဟေရှာ ၆၄း ၆ ) တကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်း၊ လောဘကြီးခြင်းနှင့် သင့်သဘာ၀၌ ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ပုန် ကန်ခြင်း၊ သူမပါဘဲ အသက်ရှင်လိုခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ( ရောမ ၈း ၇ ) ၎င်းမှာ ဆိုး သွင်းသောအရာ၊ သင်ပိုင်ဆိုင်သော ရွံ့မုန်းစရာစိတ်နှလုံးပင်ဖြစ်ပါသည်။ ( ရောမ ၈း ၇ ) ပထမ ဆုံးအပြစ်ကျူးလွန်သူ အာဒံထံမှ အမွေခံစားခဲ့ရသော အရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဗီဇ၊ အသွေးအ သား၊ နှင့် စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် သင့်ထားသို့စီးဆင်းလာပါသည်။ ( ရောမ ၅း ၁၂ )– “အကြောင်း မူကား၊ တစ်ယောက်သောသူ၏နာမခံခြင်းကြောင်း ( လူသားအားလုံး ) သည် အပြစ်သားဖြစ် ကြရပါသည်။” ( ရောမ ၅း ၁၉ )
မွေးခါစကလေးငယ်လေးများသည် အပြစ်ထဲ၌ မည်သို့မွေးဖွါးလာသည်ကို ကြပါ။ A. W. Pink က “လူ့သဘာ၀၏ပျက်စီးခြင်းသည် ကလေးငယ်လေး၌လည်း လွှမ်းမိုးထားသည်။ ထို့အပြင် မည်သည့်အချိန်ကာလတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သနည်း။ ( အမွေခံ ) ကောင်းသောအရာ လူထဲ၌ တစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင် မြေကြီးပေါ်တွင် မကောင်းသောအကျင့်ကို လုပ်ဆောင်ခြင်းမတိုင် မှီ ( မွေးခါစကလေးများတွင် ) ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် ( ကလေးလေး ) ကို ကောင်း သည်ဟု မြင်ပါသလား။ ဝေးပါစေ။ လူသားမျိုးနွယ်၌ ကြီးထွားမှု၏ မတူညီသောအကျိုးကျေးဇူး မှာ သူတို့သည် ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ( သူတို့သည် ) မကောင်းသောသူများဖြစ်ကြလေသ တည်း။ သူတို့သည် မိမိဆန္ဒကိုသာထုတ်ဖော်ကြသည်။ ကွဲပြားခြင်းနှင့်ရန်တုန့်ပြန်ခြင်းသာ ဖေါ်ထုတ်ကြသည်။ သူတို့သည် အော်ဟစ်လျက် သူတို့အတွက် မကောင်းသောအရာများအ တွက် စိတ်ကောက်တတ်ကြသည်။ ထို့အပြင် ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်လာသောအခါ ( မိဘများနှင့်စိတ် ဆိုးဒေါသထွက် ) တတ်ကြပါသည်။ ( သူတို့ကို ရိုက်ပုတ် ) ရန်ပင် ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါသည်။ ထိုသို့မွေးဖွါးလာပြီး ရိုးသားမှုအလယ်တွင် ကြီးပြင်းလာသောသူသည် သူခိုး၏အပြုအမူကို မ တွေ့မြင်မှီ ( ခိုးခြင်း ) အပြစ်ကို ကျူးလွန်ခဲ့ပါသည်။ ဤသို့သော ( အမှား ) လူ့သဘာဝကို ၎င်း၏ အစတည်ရှိခြင်းမှ စတင်၍ ( အပြစ်ရှိသောသူအဖြစ် ) မြင်တွေ့ရပါသည်။ (A. W. Pink, Gleanings from the Scriptures, Man’s Total Depravity, Moody Press, ၁၉၈၁၊ စာ- ၁၆၃၊ ၁၆၄ ) ထိုအကြောင်းကို မင်နီဆိုဒါရာဇဝတ်မှုကော်မရှင်က ၎င်းတို့၏အစီရင်ခံစာတစ်ခု တွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။ “ကလေးတိုင်းသည် ရိုင်းစိုင်းသောကလေးအဖြစ် ဘဝကို စတင်ခဲ့ကြသည်။ သူသည် လုံးဝတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုဗဟိုပြုထားပါ သည်။ လိုချင်သောအခါ သူတောင်းသည်ကို အတင်းရယူလိုသည်။ သူ့အမေရဲ့အာရုံစိုက်မှု၊ ကစားဖေါ်၏အရုပ်၊ ဦးလေး၏နာရီ စသည်တို့ကို အတင်းတောင်းယူသည်။ ဤအရာများကို သူ့အား ငြင်းပယ်လျှင် သူသည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ဖျက်ဆီးသည်။ လူကိုပါ သတ်တော့ မည့်သဘောဖြစ်လာသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကလေးတစ်ဦးတစ်ယောက်မဟုတ်၊ ကလေးတိုင်း သည် ဆိုးသွင်းပြီး ပြစ်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါသည်။ ..ဥပမာ.. အပြစ်သားဖြစ်သည်။” (Haddon W. Robinson, Biblical Preaching, Baker Book House, ၁၉၈၀၊ စာ- ၁၄၄၊ ၁၄၅ ကို ကိုးကားသည်။ )
အပြစ်၏မျိုးစေ့သည် သေခြင်းအဖို့ ကြီးထွားလာ။
သို့သော် အလုံးစုံ၌ ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်။
(“ဆာလံ ၅၁” Dr. Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ).
ကလေးတစ်ဦးသည် မွေးဖွါးလာသည်နှင့် အလန့်တကြား အော်ဟစ်သည်။ အဘယ်တိရစ္ဆာန် မျှ ထိုသို့မလုပ်ပါ။ လူသားကလေးကဲ့သို့ပြုမူလုပ်ဆောင်လျှင် အခြားတိရစ္ဆာများ၏သတ်ဖြတ် ခြင်းကို ကြုံတွေ့ရမည်။ သို့ရာတွင် လူသားကလေးများသည် ဘုရားသခင်၊ အခွင့်အာဏာနှင့် အသက်ကိုယ်တိုင်ကိုပင် မွေးသည်နှင့်ချက်ချင်း ဆန့်ကျင်ခဲ့ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ သင်သည် ဘိုးဘေးအာဒံထံမှ ရသော မွေးရာပါအပြစ်ကြောင်း ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များကို ပုန်ကန်ရန်၊ ဆန့် ကျင်ရန်၊ ကိုယ့်လမ်းကို တောင်းဆိုရန်၊ နှင့် မှန်ကန်သောအရာကို ငြင်းပယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံး၌ ဒုက္ခခံစားခြင်းနှင့်သေခြင်းကို ဖြစ်စေသောအချက်ရာ၏ အရင်း အမြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မွေးရာပါအပြစ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ပင် သင် သည် ပြစ်မှားသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်မိဘတွေက သင်သည် ခရစ်ယာန်လူငယ်လေး ဟုသာ တွေးကြမည်။ သို့ရာတွင် သင်သည် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုလုပ်ဆောင်ရန် မုန်း တီးသော အပြစ်သားလေးပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဤဗီဇအပြစ်အလုံးစုံတို့ကို လူတို့ပြစ်မှားသော ကာယ၊ ဝဇီ၊ မနောတို့နှင့် ပေါင်းစည်း ပေးသည်။ ယေရှုအဘယ့်ကြောင့် ရိုက်ခြင်းခံရသည်ကို အလွယ်တကူ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် လောကီသားတို့အပြစ်ကို သူ့အပေါ်သို့တင်လိုက်သောအခါ သူသည် ညှင်း ဆဲခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။
သင်တို့၏ကျမ်းစာအုပ်ထဲက ဤအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး လုကာ၏ဖေါ်ပြချက်ကို ကြည့်ပါ။ လုကာ ၂၂း ၄၄ တွင်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်ပြီး အသံကျယ် ကျယ် ဖတ်ကြပါစို့။
“ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျက် အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ဆုတောင်း တော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊ မြေပေါ်၌ကျသော သွေး စက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း။” ( လုကာ ၂၂း ၄၄ )
အားလုံးထိုင်နိုင်ပါသည်။ J. C. Ryle က “ဥယျာဉ်အတွင်းယေရှုခံစားခဲ့ရသော ဒုက္ခဝေဒနာကို အဘယ်သို့ ( ရှင်းပြ ) နိုင်မည်နည်း။ ပြင်းထန်သော ဤဒုက္ခဝေဒနာတည်းဟူသော စိတ်နှင့် ကိုယ်ခန္ဒာနှစ်ခုစလုံးအတွက် အကြောင်းပြချက်များကား အဘယ်သို့နည်း။ ကျေနပ်စရာ ကောင်းသည့်အဖြေတစ်ခုသာရှိပါသည်။ အခြားတစ်ဦးဦးခံစားရသော လောကအပြစ်၏ ဒုက္ခ ဝေဒနာသာဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ သူ့အပေါ်ကျရောက်သော ဖိအားသာဖြစ်ပါသည်။ သူ့အား ဒုက္ခဝေဒနာကိုဖြစ်စေသည့် ပြင်းထန်လေးလံသော အပြစ်သာဖြစ်ပါသည်။ ထာဝရဘုရား၏ သားတော်ကို သွေးစက်များကဲ့သို့ ချွေးစက်များကျရောက်စေသည်မှာ သူ့အပါ်ကျရောက် သော လောကအပြစ်သာဖြစ်ပါသည်” ဟုဆိုသည်။ (J. C. Ryle, လုကာ၊ အတွဲ ၂၊ The Banner of Truth Trust, ၂၀၁၅၊ စာ- ၃၁၄၊ ၃၁၅၊ လုကာ ၂၂း ၄၄ အပေါ်မှတ်ချက် )
“ဘုရားသခင်သည် အပြစ်မရှိသောသူကို ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် အပြစ်ရှိ သောသူဖြစ်စေသည်။” ( ၂ ကော ၅း ၂၁ )
“သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သူ့အပေါ် တင်တော်မူ သည်။” ( (ဟေရှာယ ၅၃း ၆ )
“ငါတို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်တိုင် သစ်တိုင်ပေါ်မှာ တင်တော်မူ ပြီ။” ( ၁ ပေ ၂း ၂၄ )
J. C. Ryle က “ကျွန်ုပ်တို့က ခရစ်တော်သည် (ဧဒင် ) ဥယျာဉ်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်နှစ်ခုစလုံး တွင် “ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သယ်ဆောင်သည်” ဟူသော ခံယူချက်ဟောင်းကြီးကို စွဲမြဲစွာ ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ မည်သည့်အခြားခံယူချက်ကမှ ( ခရစ်တော်၏အသွေးနှင့်ပြည့်သော ချွေးစက် ) အပြစ်ရှိသောလူ၏စိတ်နှလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်လေ့မရှိပါ၊ သို့မဟုတ် ကျေနပ်စေမည်မ ဟုတ်ပါ” ဟုဆိုသည်။ ( ၎င်း ) Joseph Hart က ဤသို့ဆိုသည်။
မောပန်းနွမ်းနယ်၊ ဒုက္ခဝေဒနာနှင့် သွေးချွေးစက်သို့စီး။
( “နားမလည်နိုင်သောဒုက္ခဝေဒနာ” Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈
ဤညချိန်ခါ၊ အညိုရောင် သံလွင်ရွက်ပေါ်မှာ” သံစဉ်စာသားပြုသည်။ ) .
တဖန် Joseph Hart က ဤသို့ဆိုပြန်သည်။
( “ကျိန်စာများစွာကို သည်းခံခဲ့” Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈၊
“အပြစ်ရှိသောသူ၊ လာပါ” ကို သံစဉ်ပြုထားသည်။ ).
ထို့အပြင် William Williams က ဤသို့ဆိုပြန်သည်။
ဝတ်လုံအလား ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာနှင့်အတူ၊ အပြစ်သားများအတွက် စီစဉ်ထား၊
(“ဝေဒနာထဲကမေတ္တာ”၊ William Williams, ၁၇၅၉;
ပလ္လင်တော်ပတ်လည်ရှိ ကြီးမြတ်သောချိုမြိန်မှုများ”သံစဉ်ဖြစ်သည်။ ).
“သင်ခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို သူ့အပေါ်တင်တော်မူ သည်။” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၆ )
ဤအရာမှာ ခရစ်တော်၏ကိုယ်စားပြုရန်ငြိမ်းစေခြင်း၏အစဖြစ်ပါသည်။ “ကိုယ်စားပြု” ဟုဆိုရာတွင် အခြားသူတစ်ဦး၏နေရာ၌ အခြားတစ်ဦးက ဝင်ရောက်ပြီး ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်တော်သည် သင့်နေရာတွင် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားသည်။ သင့်အပြစ်တွက် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရသည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် မိမိကျုးလွန်သောအပြစ်လုံးဝမရှိပါ။ ခရစ် တော်သည် ဂေသရှေမာန်ဥယျာဉ်တွင် ညည့်အချိန်၌ သံလွန်ပင်အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အ ပြစ်ကို သယ်ဆောင်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ့ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သံမှိုနှင့်ရိုက်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက် အပြည့်အဝပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့သောမေတ္တာကို သင်သည် မည် သို့ငြင်းပယ်မည်နည်း။ ခရစ်တော်ပေးသော မေတ္တာမျိုးကို မည်သို့ငြင်းပယ်နိုင်မည်နည်း။ သင့် စိတ်နှလုံးကိုခိုင်မာစေပြီး ထိုသို့သောမေတ္တာကို မည်သို့ငြင်းပယ်နိုင်မည်နည်း။ ဤသူသည် ဘု ရားသခင်၏သားတော်၊ သင့်နေရာတွင် အစားထိုးဒုက္ခခံစားသူ၊ သင့်အပြစ်အတွက် ရန်ငြိမ်းစေ သူဖြစ်ပါသည်။ သင့်အပြစ်အတွက် သူပေးဆပ်သောမေတ္တာကို အချည်းနှီးဖြစ်စေဖို့ သင်သည် အေးတိအေးစက်ဖြစ်စေပြီး စိတ်နှလုံးခိုင်မာစေလျက်ရှိပါသလား။
သင်သည် ခရစ်တော်က သင့်အတွက် ဒုက္ခခံစားနေခဲ့ရသည်အကြောင်းကိုကြားရ သောအခါ စိတ်နှလုံးခိုင်မာလျက် အေးတိအေးစက်ဖြစ်ခြင်းရှိမရှိကို သင့်အား မေးလိုပါ၏။ သင့်အပြစ်ငြိမ်းစေရန် ခရစ်တော်ခံ၇သောဒုက္ခနာကျင်ခြင်းအကြောင်း ကျွန်ုပ်ပြောဆိုသဖြင့် သင်သည် အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ခံစားနေခဲ့ရပါသလား။ သင်၌ အဓိပါယ်မရှိဘဲဖြစ်နေပါသ လား။ သင်သည် ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သံမှိုနှင့်ရိုက်ထားပြီး အနီးအနားတွင် သေသော ယေရှု၏ဝတ်လုံတော်ကို စာရေးတံချသောစစ်သားကဲ့သို့ အသားမာလျက်ရှိပါသ လား။ ထိုသို့မဖြစ်ပါစေနှင့်။ သင်သည် ကယ်တင်ရှင်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပြီး သန့်ရှင်းသောအ သွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် ယနေ့ညတွင် ကယ်တင်ရှင်အား အသနားခံ ပါသည်။
သင်က “လက်လွှတ်အရှုံးပေးရန်များစွာရှိသည်” ဟု ဆိုပေမည်။ သင်သည် မာနတ် စကားကို နားထောင်ဖို့ ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ ဤအရာလောက်အရေးကြီးသောအရာ ကမ္ဘာပေါ် တွင်မရှိပါ။
အား၊ ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ရှင် အသွေးသွန်းပါသလား၊ အုပ်စိုးသောအရာ အသေခံလား။
ကျွန်ုပ်လို ပိုးရွအတွက်နှင့် နာကျင်ဝေဒနာကို ခံစားပါသလား။
သို့ရာတွင် ဝမ်းနည်းမျက်ရည်သည် မေတ္တာကြွေးကို မဆပ်နိုင်ပါ။
ကိုယ်တော် ကျွန်ုပ်ကိုယ်ကို ပေးအပ်ပါ၏၊ ဤမျှသာ ကျွန်ုပ်တတ်စွမ်းနိုင်။
( “အာ၊ ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ရှင်သွေးသွန်လား?” Dr. Isaac Watts, ၁၆၇၄-၁၇၄၈ ).
သင်သည် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကိုးစားရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ သူ့အား မိမိ အသက်ကိုပေးရန် အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား။ သူ့မေတ္တာက သင့်ကို လှုပ်နိုးပါသလား။ သို့မ ဟုတ်လျှင် မသွားပါနှင့်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ရှေ့သို့လာပြီး ပထမနှစ်တန်းတွင် ထိုင်ပါ။ အာမင်။
“ဂေသရှေမာန်၊ သံလွင်တောင်ပေါ်"၊ (Joseph Hart, ၁၇၁၂-၁၇၆၈ ရေးစပ်သည်။ )